दिल्ली भ्रमणको अनुभवः भारतीय ‘रुलिङ क्लासले’ नेपालमा अझै भूमिका खोज्दैछ « Dhankuta Khabar
मैले बोलेको कुरा दूताबासमा रेकर्ड छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ
प्रकाशित मिति : Feb 18, 2017
काठमाडौं, ७ फागुन । आज फागुन ७ गते । ‘दिल्ली सम्झौता’ भई नेपालमा प्रजातन्त्र आएको आज ६७ वर्ष लागेको छ । तर, आधा शताब्दी बित्दासम्म भारतीय शासक वर्गले नेपाललाई हेर्ने नजरमा खासै परिवर्तन नआएको महसुस अधिकांश नेपालीहरुले गरिरहेका छन् । माओवादीका बरिष्ठ नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रकाश) ले पनि अघिल्लो साता दिल्ली भ्रमणका बेला यस्तै महसुस गरेछन् ।
दिल्लीबाट फर्केपछि नेता श्रेष्ठलाई अनलाइनखबरले सोधेको छ-नेपालसम्बन्धी भारतीय नेताहरुको बुझाइ कस्तो रहेछ ? श्रेष्ठले निचोड सुनाउँदै भने- ‘मुख्य कुरा, जो उहाँहरुले खुलारुपमा भन्नुहुन्न, नेपालमा ऐतिहासिक-राजनीतिक घटनाक्रम जो अगाडि बढ्छ, भारतको भूमिका त्यहाँ हुनुपर्छ, भन्ने उहाँहरुको अन्तर्यमा छ ।’
माओवादी पार्टीभित्र राष्ट्रवादी धारका नेताका रुपमा परिचित पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले दिल्ली भ्रमणका क्रममा के-कस्तो अनुभूति गरे ? यसैमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीः
नेपालको उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वले, हामीले हाम्रो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हितको पक्षमा प्रष्ट-प्रष्ट कुरा गर्नेमा पनि शायद केही कमीकमजोरी भएको हो कि भन्ने अनुभूत गरेको छु
मधेसको वास्तविक हितमा भारतका हाम्रा मित्रहरु कति हुनुहुन्छ, त्यो वेग्लै कुरा हो । तर, मधेसको कुरा उहाँहरु धेरै गर्नुहुन्छ । मधेसलाई धेरै असमान व्यवहार गरियो, अहिलेको संविधानले पनि धेरै भेदभाव गर्‍यो भन्ने परेको जस्तो प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, जो वास्तविकता होइन
मुख्य कुरा, जो उहाँहरुले खुलारुपमा भन्नुहुन्न, नेपालमा ऐतिहासिक-राजनीतिक घटनाक्रम जो अगाडि बढ्छ, त्यसमा हाम्रो निर्णायात्मक भूमिका हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै भारतको रुलिङ क्लासमा छ
छ । ००७ सालमा पनि हामीले गरेको हो । ०४७ मा पनि गरेको हो । ०६२/६३ मा पनि हाम्रै हो । र, अब जसरी राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढ्छ, त्यसमा हाम्रो निर्णायात्मक भूमिका हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै भारतको रुलिङ क्लासमा छ । भारतीय शासकको यो अवधारणाद्वारा भारतीय समाज पनि प्रभावित छ ।
यहाँ तपाईहरु यसो नगर्नुस् भन्ने काम कसैले गर्नुभएन । तर, छलफलका क्रममा विभिन्न प्रस्तुतिले के अर्थ होला भनेर बुझ्न नसकिने त होइन । धेरैले यो गर्नुस्, चुनाव भएन भने अब खतम हुन्छ नै भने । ‘गुडलक’ भन्ने शब्द नै प्रयोग गर्नुभो । कतिपय छलफलहरुमा चाहिँ आन्तरिम मामिलामा हस्तक्षेप, सुक्ष्म व्यवस्थापन रोकिनुपर्‍यो, त्यसो भएपछि मात्र नेपाल भारत सम्वन्ध राम्रो हुन्छ भन्दा वा अब हामी त चुनाव गरेर जाने भयौं भन्दा एकदमै सकारात्मक प्रतिक्रिया सबैबाट पाउने अपेक्षा मैले गरेको थिइनँ र कतिपय भेटघाटमा त्यस्तो पनि देखियो ।
संविधान बन्ने अन्तिम क्षणमा दिल्लीबाट आएका दूतले यसो गर, उसो गर भन्न थालेपछि नेपाल-भारत सम्वन्धमा तनाव सुरु भयो । र, संविधान घोषणापश्चात नाकाबन्दीसम्म लागेपछि यो निकै उत्कर्षमा पुग्यो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीयहरुको जुन अनावश्यक चासो थियो, त्यो कायमै रहेछ या उनीहरुले यसमा गल्ती महसुस गर्न थालेछन् ?
एउटा कुरा त बाहृयरुपमा पनि देखिसकिएको छ कि उनीहरुले औपचारिक घोषणा नगरे पनि नाकाबन्दीसम्मको घटना क्रम देखियो, त्यो भारतको तर्फबाट गल्ती थियो र भारतलाई नै प्रत्युत्पादक भयो भन्ने उनीहरुको निष्कर्षका आधारमा नीति निर्णयमा परिर्वतन भएको छ ।
दोस्रो कुरा, छलफल गर्दा मैले के पाएँ भने धेरै ठूलो हिस्सामा भित्रदेखि ‘रियलाइजेशन’ छ । नेपालजस्तो मित्रलाई हामीले त्यसो गर्नुहुन्थ्यो ? त्यो पनि हामीले तेल ध्यू पुर्‍याउनुपर्ने बेलामा चाडपर्वलाई पनि असर पार्ने गरी ? कतिपय मित्रले त खुलेर भन्नु भो कि भारतले ‘ब्लन्डर’ गर्‍यो ।
तर, जसले यो निर्णय गर्‍यो, भित्र अलिकति पोलिसी सिफ्ट गरिसकेको अवस्थामा पनि त्यसको हृयाङओभर बाँकी नै छ भन्ने देखिन्छ । तर, त्यो छलफल गरेर, कूटनीतिक ढंगले प्रभावकारी भूमिका अगाडि बढाएर हल गर्नै नसक्ने ठाउँमा छ भन्ने मलाई लागेन ।
३६ सय प्रहरी थप्न गृह मन्त्रालयद्वारा मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस